कला र मनोरञ्जन, कला
यदि तपाईं नजीक देख्नुहुन्छ भने, त्यसपछि एक शानदार टोपोटमा तपाईंले बिरालो देख्न सक्नुहुनेछ, र यसले अन्डाको मात्र एक को प्रतिबिंबित गर्दछ। ताजा चिया र एक चालाक कुकुरको साथ एक अनुहार काँच । पीटरव्रो-वोडकिन कस्तो चित्रको कथा थियो "प्वाइन्ट अझै लाइभ" मा उनको चित्रकलापलाई प्रचार गर्ने? चित्रको वर्णन तल दिइएको छ।
कलाकारको संक्षिप्त जीवनी
कुज्मा सर्गेभिभ पेभ्रो-वोदकि 1878 मा सर्तोभ प्रांतमा जन्मिएको थियो। 27 वर्षको उमेरमा उनले मस्को स्कूलको चित्रकारी, मूर्तिकला र आर्किटेक्चरबाट स्नातक गरे, जसका बीचका सल्लाहकार VA सेरोभ थियो। त्यस पछि उनले धेरै यात्रा गरे र युरोपमा कला स्टूडियो भ्रमण गरे।
उहाँको प्रारम्भिक कार्य प्रतीकहरूको भावनामा निष्पादित गरिएको छ (उदाहरणका लागि, "ड्रीम" 1911 मा)। "स्नान रेड हर्स" चित्र (1912), जसले कलाकार संसारको प्रसिद्धि ल्यायो, रूसको भाग्यसँग पहिचान गरिएको छ। 1910 मा लेखकले आफ्नो आफ्नै कलात्मक र सैद्धांतिक प्रणाली सिर्जना गर्दछ, जसमा उहाँ वरिपरिका संसारमा "जीवित रूप" देखाउने प्रयास गर्दछ। Petrov-Vodkin उनको अझै पनि जीवन "द हिर्निंग" र "मार्निंग अलि लाइफ" मा यो प्रवृत्ति को प्रसार गर्न को लागी प्रयास गर्दछ। चित्रकलाको विवरण 1923 को युद्धपछि यो दर्शकलाई स्पष्ट पार्दछ कि कलाकारले गृहयुद्धको चित्रलाई आदर्श बनाउन खोजेको छ। 1934 मा फिल्म "चिन्ता" मा, स्टेलिनको "ठूलो आतंक" को नीति को "प्रचार" गर्न सक्छन्, र 1937 को "गृहकार्यकारी" पूर्व बुर्जुआलाई छुटकारा दिइन्छ। Petrov-Vodkin उनको बादका कामहरुमा साहित्य ("द स्पाइस ऑफ इक्लिड" 1933 मा) मा परिणत गर्न मन लाग्यो र तिनीहरूलाई "काल्पनिक आत्मकथा" बनाउँदछ।
कलाकार 1939मा लेनिनग्राद मा मृत्यु भयो।
कुज्मा पेट्रो-वोडकिनको चित्रको विवरण "बिहानको जीवन"
आफ्नो काम को एक निश्चित अवधि मा, Petrov-Vodkin अझै पनि जीवन मा ध्यान केंद्रित। त्यसोभए, "बिहान बिहानै जीवन" को स्थान र चीजको बारेमा "प्रकार" को एक प्रकारको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ। कलाकारले सज्जन, हल्का रङ्गहरू प्रयोग गर्दछ: निलो घन्टीहरू, पहेंलो dandelions, एक गुलाबी काठको काँटा तालिका संग विपरित। यस तालिकामा रहेका वस्तुहरू एक साथ एक दृष्टिकोण सिर्जना गर्दछ र समान रूपमा नजिकका दर्शक हुन्। वस्तुहरूको रूप फरक र सटीक छ। कलाकार जानबूझकर एक निकल प्लेटेड कफी बर्तन मा गलत प्रतिबिम्ब बनाउँछ र एक गिलास संग चाय को बिरुद्ध एक चम्मच पनि गर्दछ। यो Petrov-Vodkin जोडने प्रयास गर्दछ: हाम्रो दृष्टि देख्दा वस्तुहरूको वास्तविक गुणहरूमा निर्भर गर्दछ।
कलाकार जानबूझकर जीवित प्राणी चित्र मा परिचय - एक कुत्ते र बिल्ली को तालिका देखि देख्न को लागी, जो कफी बर्तन मा प्रतिबिंबित छ। यो, बारी मा, एक व्यक्ति को उपस्थिति को प्रतीक छ। तपाईं पनि "उपस्थिति" तालिकामा रहेका सम्पूर्ण वस्तुहरूलाई अझ बढि देख्न सक्नुहुन्छ। कस, यदि मानिस होइन, ताजा जंगली फूलहरू ल्याइदिनुभयो? कुकुर हेर्दै र कसको म्यागेजले टेबलमा छ? कलाकारले विशेष गरी पछाडिको जीवनलाई चित्रण गर्यो जहाँ व्यक्तिलाई बस्नु पर्छ। यसैले, दर्शकले उपस्थितिको प्रभाव हुन सक्छ, जुन उनको चित्रकारी "मार्निंग अलि लाइफ" पेट्रो-वोडकिनमा निहित छ।
"हेराइङ" चित्रको विवरण र "बिहान अझै पनि जीवन" संग तुलना
Petrov-Vodkin इतिहासमा मोटो बिन्दुहरूको साक्षी: पहिलो संसार र नागरिक युद्ध। सन् 1918 मा, जब यी चित्रहरू लेखिएका थिए, कलाकारले पिटरबर्गमा बस्नुभयो र कला विद्यालयमा सिकाउनुभयो।
"हेराइङ" चित्रमा तपाईँले तालिकाको सट्टा कलाकारको सुरुवात सँग क्यानभास देख्न सक्नुहुनेछ। यो गुलाबी कागज (मेजबानीको लागि एक विकल्प) सँग आवरण गरिएको छ। केही चीजहरू छन्: दुई आलु, कालो रोटीको टुक्रा र गहिरो नीलो पेपरमा हरिङ। "बिहानै उठेर जीवन" मा मेज अधिक अधिक (चिया, अण्डा) छ, तर तस्वीरहरु को वातावरण समान छ। तिनीहरू दुवै लाइट भावनाहरू राख्छन् र रोजगारी सादगी प्रतिबिम्बित गर्छन्।
कलाकार यी चित्रहरूमा समयको बोझलाई चित्रण गर्दछ, ती दिनहरूमा खाना असाध्यै र बेवकूफ थियो। यही कारणले गर्दा क्यान्सरहरूले अल्पविरामको चित्रण गर्दछ, तर भोजन, जुन मानिसहरू कठिन समयको बारेमा खुसी थिए। दुवै चित्रहरू प्रकाश उदासी र एकै समयमा आनन्दसँग भरिएका छन्।
यसरी, दैनिक आनन्द को चित्रण गर्दछ, साधारण आनन्द संग भरी छ, उनको पेंटिंग "मार्निंग अझै पनि लाइफ" मा Petrov-Vodkin द्वारा। लेखमा दिइएको चित्रको वर्णनले कलाकारलाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्यो भनेर प्रतिबिम्बको लागि एक विशाल ठाउँ खोल्छ, कसरी उनले तिनको वरिपरी संसार देख्नुभयो र कसरी यो हालका श्रोताहरूलाई यो गर्ने प्रयास गरे।
Frottazh - कस्तो प्रकारको प्रविधि यो हो? यो के हो र कसरी यो मास्टर गर्ने?
हाइड्रोजन पेरोक्साइड भित्र? आफ्नो शरीर मा दया छ
होटल Villa डेल सोल4* (Phan Thiet, भियतनाम) फोटो र समीक्षा
चरण पुस्तिका द्वारा चरण - मास्टिक संग केक कसरी सजाउनु गर्न
श्रीलंका Polenova परामर्श विभाग मा ठेगाना, रेकर्ड। स्नायुशल्यचिकित्सा को रूसी वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थान प्रोफेसर ए एल Polenova पछि नाम
आहार "तालिका 9" मधुमेह। चिकित्सकीय आहार "तालिका 9": दोस्रो प्रकार को मधुमेह लागि विशेष गरी खाना
संसारमा सबै भन्दा ठूलो पोर्ट कहाँ छ? मूल्यांकन र समुद्र बंदरगाह बारेमा रोचक तथ्य
छुट्टी व्यञ्जनहरु: भरी अन्डा